ZESN Inoti Dzimwe Nzvimbo dzeKuvhotera Dzanga Dzisina Zvikwanisiro zveVanorarama neHurema
ZESN, iyo iri kuongorora mafambiro ari kuita sarudzo dzema by-election dzaitwa neMugovera yakabatana neElection Resource Centre, inoti vaongorori vavo vesarudzo vari mune mamwe matunhu ari kuitirwa sarudzo akaita seEpworth, Murehwa South, neChivi South manga musina zvikwanisiro zvinoita kuti vanorarama nehurema vavhote zvakanaka kana kutokwanisa kuvhota.
Mugwaro raraburitsa, sangano iri rinotiwo raona huwandu hwakanyanya hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota paMangani Business Centre Tent A kuBinga North.
Vaongorori vesarudzo ava vanonziwo vaona kuti masabhuku nemadzishe vaendawo nezvikwata zvevanhu kunovhota vachivakomekedza kuti vati vanoda kubatsirwa kuvhota vachivhotera nhengo yeZanu PF.
Sangano iri ratiwo ratambira nyunyuto pamusoro pe ink iri kushandiswa mukuratidza kuti munhu avhota, iyo inonzi yakasiyana-siyana ruvara, uye isiri yemhando yepamusoro, izvo zvinogona kuita kuti munhu abiridzire achivhota kakawanda.
ZESN yati yaisa vaongorori vayo vesarudzo vanodarika mazana amana mumatunhu makumi maviri nemasere aitirwa sarudzo dzekutsvaga vamiriri vedare reparamende pamwe nezana nemakumi maviri nemaviri ane sarudzo dzevamiriri vemakanzuru.